၁၃ရက် မေလ ၂၀၁၅
ပြန်ဖို့ရက်နီးလာတာနဲ့အမျှ ကျွန်မတို့ရဲ့ ဟန်းနီးမွန်းခရီးစဉ်လေးကလဲ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ နှေးလာပါတယ်။ နေရာတွေလုပ်ချင်တာတွေ အများကြီး အလျင်စလိုမလုပ်တော့ပဲ တစ်ရက်မှာ တစ်ခု ၂ခုပဲ ဖြေးဖြေးလုပ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဟန်းနီးမွန်းဆိုတော့ ဂွန်ဒိုလာတောင်ထိပ်က ရိုမန်တစ် ဘူဖေးလေးဘာလေးစားရင်း တခြားနေ့တွေထက်သုံးဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တကယ်သွားစားတော့ ဟန်းနီးမွန်းမဟုတ်လဲ Queenstown ရောက်ရင် Gondola ပေါ်က ဘူဖေးစားဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ ရှုခင်းလှလှ… အစားအသောက်ကောင်းကောင်းနဲ့ အတော်လေးကို စိတ်ကြည်နူးစေပါတယ်။
Let's go to Gondola with cable car
မနက် ၉ကိုးနာရီခွဲ Cable ကားနဲ့ Queenstown တောင်ခြေ ကနေ Gondola တောင်ထိပ်ကိုတက်ခဲ့ပါတယ်။ မိုးတွေက ဖွဲဖွဲကျနေလို့ တောင်ပေါ်မှာ လူတောင် သိပ်မရှိပါဘူး။ ကိုယ်လဲ Zipline မှ လုပ်လို့ရပါ့မလားဆိုတဲ့ ကြောက်စိတ်နဲ့ပေါ့။ တောင်ပေါ်လဲတောင်ပေါ်သွားမှာ မိုးကလဲ ရွာနေတယ်ဆိုတော့ ရာသီဥတုအရမ်းအေးမှာကို ကြောက်ကြောက်နဲ့ ဟိုတယ်က ထွက်လာကတည်းက ဘောင်းဘီ ၃ထပ်၊ အင်္ကျီ ၄ထပ်ဝတ်လာမိတော့ လူက တကယ်ကို ပစ်တိုင်းထောင်လို လုံးနေတာပေါ့။
ရောက်ရောက်ချင်း zipline နေရာကို ရှာဖို့ အပြင်ထွက်လိုက်တော့ zipline စီးမဲ့ တခြား အုပ်စု တစ်စုနဲ့တွေ့ပါတယ်။ သူတို့နောက်လိုက်သွားရင်း စီးမဲ့နေရာရောက်တော့ ဘယ်သူမှ မရှိပါဘူး။ ဒါနဲ့ စောနေသေးတယ်ထင်တယ်ဆိုပြီး အဆောက်အဦးရှိတဲ့ဘက်ပြန်လျှောက်လာပါတယ်။ တချိန်တည်းမှာပဲ မိုးက အနည်းငယ်သည်းလာပါတယ်။ မိုးသာမရွာရင်တော့ အောက်က Queenstown မြို့ကို လှမ်းမြင်နေရမှာပါ။ ဒီလိုနဲ့ အဆောင်ထဲက စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုမှာပဲ ကော်ဖီနဲ့ မုန့်စားရင် ထိုင်စောင့်နေလိုက်ပါတယ်။ နာရီဝက်လောက်နေမှ မိုးနည်းနည်းစဲသွားလို့ zipline နေရာပြန်ထွက်ကြည့်တော့မှ စီးလို့ရနေပါပြီတဲ့။ zipline4lines စီးတာ ကျွန်မနဲ့ သူ ၂ယောက်တည်းရှိတယ်။ တခြား လာလည်သူ ဘယ်သူမှ မရှိဘူး။ ကိုယ်တောင်မှ ဟုတ်ရဲ့လား။ ဒီရာသီဥတုနဲ့ စီးလို့ရရဲ့လား စိတ်ထဲ ဇဝေဇဝါ။ မိုးက တောအုပ်ထဲ ထင်းရှုးပင်တွေအုပ်နေတော့ မရွာသလောက်တော့ရှိပါတယ်။ သူတို့က Zipline4lines စီးတာ စုစုပေါင်းကြာချိန်က ၄၅ မိနစ် ၁နာရီလောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ အစက ကိုယ်က ခပ်လန့်လန့်ဖြစ်နေတာ။ (ကိုရီးယား နာမီကျွန်းမှာစီးတုန်းက မြစ်ကိုဖြတ်ဆောက်ထားတဲ့ zipline တောင် ၅မိနစ်လောက်ပဲကြာတာလေ။ ဒါတောင် အသည်းအေးတာ ခုအကြာကြီးပဲလို့ ထင်မိလိုက်တာပေါ့)။ နောက်မှ သူက ၄ lines ဆိုတာ ziplines အတိုလေးတွေ ၄ခါဖြတ်ဖြတ်စီးရသလိုဖြစ်နေတာ။ တစ်လိုင်းစီးပြီးတိုင်း ကြိုးတွေတပ်ရ ပြန်ဖြုတ်ရ။ ပြီးတော့ သူတို့ Queenstown မြို့အကြောင်း ရှင်းပြလိုက်နဲ့ ကြာတာ။ စီးရတာက ဘယ်လောက်မှ မကြာဘူး။
မနက်စာ၀င်စားခဲ့တဲ့ Gondola ထိပ်က ကော်ဖီဆိုင်လေး
စစီးမယ်ဆိုတော့ သူတို့ပေးတဲ့ မိုးကာဝတ်စုံလိုဟာမျိုးတွေကိုလဲ ဝတ်ရသေးတယ်။ ပါလာတဲ့ အိတ်တွေ အထုတ်တွေ အကုန်ထားခဲ့ရတယ်။ လော့ကာလဲ မဟုတ်တော့ ပစ္စည်းတွေ သိပ်စိတ်မချချင်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ သူတို့က စိတ်ချရပါတယ်ပြောတော့လဲ ပိုက်ဆံအိတ်နဲ့ Gopro ကင်မရာလေးတော့ ကိုယ်နဲ့ယူလာလိုက်တယ်။ ကိုယ် zipline စီးတာကို ရိုက်စေချင်တော့ Gopro ကင်မရာကို Mr.Right ရင်ဘတ်မှာ တပ်ပေးလိုက်မိတယ်။ (ဘဝမှာ ပြန်ပြင်လို့မရတဲ့ အမှားပဲ)။ ကိုယ်ကတော့ သူတို့ အတန်တန်ပစ္စည်းကျမယ်နော်ဘာညာပြောနေပေမဲ့ ကိုယ့်ဖုန်းကိုတော့ သူတို့ပေးတဲ့ မိုးကာဝတ်စုံ အပြင်အိတ်ထဲထည့်ထားလိုက်တယ်။ Mr.Right စီးတာကို ကိုယ်က ဖုန်းနဲ့ရိုက်ပေးလို့ရအောင်။ အာ့ကြောင့် ခု zipline စီးတဲ့ ကိုယ့်ဗွီဒီယို ဘာတစ်ခုမှ ကောင်းကောင်းမရခဲ့ဘူးလေ။
ခဏတာ တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ စတီဗင် ၂ဦး
စီးတဲ့တောက်လျှောက် လိုက်လုပ်ပေးတဲ့ လူ ၂ငယ် ၂ယောက်က ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပါပဲ။ သူတို့ရဲ့ အလုပ်ကြောင့် တာဝန်အရ ကာစတန်မာ စိတ်ချမ်းသာအောင် ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပဲ ဆက်ဆံ ဆက်ဆံ၊ တကယ်ပဲ သူတို့က ပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ် ကာစတန်မာတစ်ယောက်အနေနဲ့တော့ သူတို service ကို ကျေနပ်တယ်။ သူတို့က ကျွန်မတို့ရဲ့ ဗွီဒီယိုကင်မရာကိုတော့ သိပ် သက်တောင့်သက်သာရှိပုံမရဘူး။ သူတို့ကို မရိုက်စေချင်ဘူးထင်တယ်။ ဒါကလဲ personal privacy protection အရတော့ မရိုက်စေချင်လဲ သူတို့ မလွန်ပါဘူးလေ။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်တွေကလဲ လာတုန်း အကုန်မှတ်တမ်းတင်ချင်တာကိုး။ တကယ်တန်းပိုက်ဆံပေးပြီး ရွေးရတဲ့ ပုံမှာတော့ သူတို့က မျက်နှာပြောင်တွေနဲ့ အိုက်တင်လုပ်ပေးရှာပါတယ်။ ပြီးတော့ သူတို့ ၂ယောက်ရဲ့ ဝန်ဆောင်မှုမှာ စီးတဲ့ zipline4လိုင်းမှာ တစ်လိုင်းနဲ့ တစ်လိုင်း ရိုးရိုးစီးတာမဟုတ်ပဲ ဇောက်ထိုးစီးနီးတို့ ဘာတို့ကို ပျော်အောင် သင်ပေးတယ်။ ဇောက်ထိုးစီးဖို့က ဇ နည်းနည်းရှိမှရတာ။ သင်ပေးနေတုန်းကတော့ ကိုယ်က ကြောက်ပြီး မလုပ်ရဲဘူးပြောတယ်။ Mr.Right က ဘာဖြစ်လဲ လုပ်ကြည့်တာပေါ့ ပျော်စရာကြီးဆိုပြီး တကယ်စီးတော့ ကိုယ်က တကယ်ဇောက်ထိုးလုပ်ပြီး ပျော်ပြီးစီးသွားတယ်။ သူက ဇ သိပ်မရှိတော့ ခြေပစ်လက်ပစ် ကိုယ်ကို နောက်ပြန်လှန်လိုက်ရမှာကို တကယ်တန်းကတော့ မလုပ်နိုင်ဘူး။ တဝက်လောက်ပဲရောက်ပြီး ပြီးတော့ ကြိုးလေးမှာ ငြိမ်ငြိမ်လေးပါလာလို့ ကိုယ်ကတော့ လှောင်တာပဲ မရဘူး။
With the Remarkable mountain rage
My baby Mr.Right
ခရီးတစ်ခုသွားတယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုလှတဲ့ နေရာတွေရောက်ခဲ့သလဲ၊ ဘယ်လိုကောင်းတဲ့ လိုကယ်စာတွေစားခဲ့သလဲဆိုတာအပြင် ဘယ်လို လူတွေနဲ့ တွေ့ခဲ့လဲဆိုတဲ့ အတွေ့အကြုံက နှလုံးသားထဲ အစွဲကျန်ဆုံးလို့ထင်တယ်။ ကြားဖူးတာက ကိုယ့်ဘဝမှာ တွေ့ဆုံတဲ့သူတိုင်းက ကိုယ်နဲ့ အရင်ဘဝတွေတစ်ခုခုမှာ ရေစက် ပါလို့တွေ့ကြတာတဲ့။ လမ်းသွားရင်းဖြစ်စေ၊ ရထားစီးရင်းဖြစ်စေ ခဏတဖြုတ်လေးကြုံဆုံတာတောင် အဲ့လို ခဏတဖြုတ်ကြုံဆုံးဖို့ ရေစက်ပါလာလို့တဲ့။ အဲ့ဒါကြောင့် ဘယ်တော့မှ ပြန်မတွေ့တော့မဲသူတွေ၊ ဘယ်တော့မှလဲ အဆက်အသွယ်ရှိမှာမဟုတ်သူတွေရဲ့ Hospitability နဲ့ သူတို့ပြောတဲ့ သူတို့အကြောင်းဆိုတာ ကိုယ့်အတွက်တော့ မှန်းလို့မရတဲ့ ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ဖတ်နေရသလိုဖြစ်တဲ့အပြင် ဒီလူတွေနဲ့ ငါတို့နဲ့ ရှေးဘဝက ဘယ်လိုရေစက်ပါခဲ့လို့ ခုလို ကြုံဆုံကြသလဲလို့လဲ တွေးမိတယ်။
ခု ဒီပိုစ့်ကိုရေးနေတာ မဗေဒါတကယ်ခရီးသွားခဲ့တဲ့ရက်နဲ့ဆို ၂ နှစ်ခွဲကြာနေပေမဲ့ တွေ့ခဲ့တဲ့ လူတွေအကြောင်းကျတော့ စာအုပ်နဲ့ ချမှတ် မထားတာတောင်မှ ကိုယ့်ဦးနှောက်ထဲမှာ မှတ်မိနေတာသာကြည့်။ သူတို့အကြောင်း ထူးခြားတာလေးက သူတို့ ၂ယောက်လုံးနာမည်က စတီဗင်လေ။ ၂ယောက်စလုံးက နယူးဇီလန်နိုင်ငံက မဟုတ်ဘူး။ တစ်ယောက်က ယူအက်စ်က၊ နောက်တစ်ယောက်က သြစီက အလုပ်လာလုပ်ကြတာ။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် သူတို့ ၂ယောက်လုံးရဲ့ ကောင်မလေးတွေ နာမည်ကလဲ ဂျန်နီပဲတဲ့။ zipline စီးပြီး Gondola ထိပ်ကို ခြေကျင်ပြန်တက်တဲ့လမ်းမှာ ကိုယ်တို့ အတွဲကို ဓာတ်ပုံရိုက်ခိုင်းပြီး ဓာတ်ပုံပြန်ကြည့်တော့မှ ကိုယ်ဟာ ၄ထပ်လောက်ဝတ်လာလို့ ဘောလုံးဖြစ်နေတာ ကွကိုယ် သတိထားမိသွားတယ်။ Queenstown မြို့လေးက အေးတဲ့အပြင် မိုးကလဲ ရွာနေ ကိုယ်တွေကလဲ တောင်ထိပ်ကို ထပ်တက်လိုက်သေးတယ်ဆိုတော့ စာတွေထဲမှာ တောင်ထိပ်ကပိုအေးတယ်။ နွေးနွေးထွေးထွေးဝတ်သွားဆိုတော့ လန့်ပြီး ဝတ်လာလိုက်တာ လွန်သွားတယ်။
အဲ့ဒိမှာ ငှက်ကုလားအုပ်အကြီးကြီးတွေနဲ့ သိမ်းငှက် အကြီးကြီးတွေ ရှိခဲ့ဖူးတယ်။
ဒီစာတမ်းကို အသံထွက်မှန်မှန်နဲ့ ဖတ်တတ်လားတဲ့။ ကိုယ်ဖတ်တာ မှန်လို့ သူတို့တွေအံ့သြနေတယ်။ ဘိုတွေ မှန်အောင် မဖတ်တတ်ဖူးတဲ့...
Gondola ထိပ်က luge ride စီးတဲ့နေရာ...
Scenic international Buffet Lunch on Gondola
နေ့လည်စာအတွက် Gondola ပေါ်မှာ Lunch စားဖို့ လက်မှတ်ကြိုဝယ်ထားခဲ့တယ်လေ။ ကိုယ်ရောက်သွားတဲ့အချိန် ဆိုင်မဖွင့်သေးလို့ နာရီဝက်လောက် ထိုင်စောင့်လိုက်ရသေးတယ်။ ကိုယ်ကလဲ ကိုယ်တို့ ပျားရည်စမ်းအဆုံးသတ်မဲ့နေ့တွေ နီးလာလေ အရာရာကို နှေးနှေးနဲ့ အေးဆေးပဲ ခံစားချင်တော့တယ်။ ခု ဆက်တိုက် ခရီးထွက်လာတာ ၂ပတ်ရှိပြီ။ စထွက်ကတည်းက မချောမွေ့ခဲ့တဲ့ ပျားရည်ဆမ်း၊ မတော်တဆ ထိခိုက်မှုတွေနဲ့ Thiller ကားလိုလို၊ Action ကားလိုလို စခဲ့တဲ့ ပျားရည်ဆမ်းကို ခုတော့ အေးအေးလူလူပဲ ဖြတ်သန်းချင်တော့တယ်။ Gondola ပေါ်မှာ ဘူဖေးစားဖို့ ဘွတ်ထားရင် တောင်ပေါ်တက်တဲ့ Cable car အသွားအပြန် Free လေ။ ဘူဖေးစားသောက်ဆိုင်က ခန်းခန်းနားနား အောက်က Queenstown တစ်မြို့လုံးကို အုံ့မိုးမြင်ရတဲ့အပြင် ဝါကာတီပူရေကန်ကြီးနဲ့ The Remarkable နှင်းတောင်တန်းကြီးတွေခြံရံထားတဲ့ရှုခင်းကိုပါ မြင်ရတယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် နတ်ပြည်ကနေ လှမ်းကြည့်နေတဲ့ ခံစားချက်မျိုးပေါ့။ ဒီ ဘူဖေးကို အစက ကပ်စီးနည်းပြီး မဝယ်ဖို့ စဉ်းစားပေမဲ့ ပျားရည်ဆမ်းခရီးပဲ ဒီလောက်တော့ သုံးသင့်တာပေါ့ဆိုပြီး ဝယ်လိုက်တာ တကယ်ကို မှန်သွားတယ်။ အမှန်တော့ ပျားရည်ဆမ်းခရီးမဟုတ်တောင် လုပ်ဖူး စားဖူး ခံစားဖူးသင့်တယ် အတွေ့အကြုံတစ်ခုပါ။ နယူးဇီလန်အထိ ရောက်အောင်လာပြီးမှတော့ Gondola ထိပ်က ဘူဖေး ဈေးကြီးလို့ မစားဖူးဆိုတာ မဖြစ်စေနဲ့နော်။ အမှန်တော့ အရမ်းတော့ ဈေးမကြီးပါဘူး။ ရှိတဲ့ မုန့်အမျိုးတွေရယ်။ ကိုယ်ခံစားရတဲ့ ခံစားချက်ရယ်နဲ့ဆို တန်ပါတယ်။ တစ်ခုပဲ မှာချင်တာက ကိုယ်တွေကတော့ စောစောစီးစီး မိုးထဲ လေထဲ zipline စီးပြီး ကြွက်စုတ်ရုပ်ဖြစ်နေတဲ့ အချိန်မို့ စားသောက်ဆိုင်က ခန်းနား ရိုမန်တစ်ဆန်ပေမဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ဝတ်ထားတာနဲ့ အပြင်အဆင်ကတော့ အမြင်မှာ ဖီးလ်နည်းနည်းငုတ်စေမယ်ထင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူနဲ့ မင်္ဂလာဦးပျားရည်ဆမ်းဆိုတော့ ကိုယ်ကတော့ စိတ်ချမ်းသာနေတာပါပဲ။
Waiting for buffet restaurant lunch opening time
We sat nearby the glass window and the view of Queenstown is breathtaking
သူတို့ အဖြူတွေ ဘူဖေးစားတာကလဲ မြန်လိုက်ကြတာမပြောနဲ့။ ကိုယ်တွေက ဆိုင်ဖွင့်ကတည်းကရောက်နေပြီး စားလို့တောင် မဝသေးဘူး ဘေးခုံကလူတွေက ပြောင်းသွားပြီ။ ကိုယ်လဲ မဆန့်မပြဲသွပ်နေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်စားနေတာ စင်္ကာပူမှာ ဘူဖေးစားသလောက်အချိန်မရှိသေးပါဘူး။ ရှုခင်းလေးကြည့်လိုက် စားလိုက်နဲ့ အမှန်ဆို စားတာကြာသွားလို့သာ ဗိုက်ပြည့်တယ်ထင်ရတာ။ တကယ်တမ်း မုန့်ချည်း ထိုင်စားမယ်ဆိုရင် ဒီထက်တောင်စားနိုင်သေးတယ်။ နောက် ဘေးခုံက ၂ခါပြောင်းဖြစ်လာတော့ ကိုယ်တွေလဲ အားနာလာတာရော၊ ဗိုက်လဲပြည့်လာတာရောကြောင့် ထွက်လာလိုက်တယ်။ ဆိုင်က Service ကလဲ ကောင်းမှကောင်းပဲ။
အဲ့ဒိနေ့ နေ့လည်ပိုင်းကတော့ ၂ယောက်သား ကိုယ်တွေနေတဲ့ Backpacker တည်းခိုခန်းလေးပြန်ပြီး မိုးအေးအေးနဲ့ ကွေးအိပ်ပျော်သွားကြတယ်။ ၂ပတ်ဇာတ်တိုက် run လာတဲ့ ကိုယ့် body လဲ အတော်ပင်ပန်းနေပြီလေ။ ညနေ နိုးတော့မှ Queenstown မြို့ထဲမှာ အိမ်ပြန်လက်ဆောင်ဝယ်ဖို့နဲ့ ကိုယ့်အတွက် ဘာဘာညာညာ shopping ထွက်ကြတာပေါ့။ ပူအိုက်တဲ့ နိုင်ငံကလာတော့ အနွေးထည်ကောင်းကောင်းဆိုလို အဖြူတစ်ထည်ပဲကိုယ့်မှာရှိတာ။ ဒီခရီးစဉ်တစ်လျှောက် ဒီတစ်ထည်တည်းနဲ့ချည်း ဓာတ်ပုံရိုက်နေရလို့ အနွေးထည်တစ်ထည် ထပ်ဝယ်လိုက်တယ်။ အဲ့ အနွေးထည်ကတော့ ခုဆို ၂နှစ်ခွဲရှိပြီး ဗီရိုထဲမှာငုတ်တုတ်ဖြစ်နေတာလေ။ ဒီအနွေးထည် ထပ်ဝတ်ဖြစ်မဲ့ နေ့တွေကို မျှော်နေပါသေးတယ်။
ညကျတော့မှ ကိုယ်တွေစားနေကျ အာရှစာရောင်းတဲ့ မောလေးက foodcourt မှာပဲ ကိုယ်က Tom Yum ထမင်းကြော်၊ သူကတော့ သူ့အကြိုက် lumb kebab စားတယ်။ ကိုယ့် အတွက်တော့ ညှီလို့ မကြိုက်ဘူး။ ဒီလိုနဲ့ပဲ ကိုယ်တို့ရဲ့ ပျားရည်ဆမ်းခရီးစဉ် ၁၂ရက်မြောက်နေ့လေးပြီးဆုံးပါပြီ။
၁၃ ရက်မြောက်နေ့မှာ ဟယ်လီကော်ပတာနဲ့ ရေခဲတောင်ထိပ်တက်တာရယ်၊ ပုံပြင်ထဲက မြို့လေးလို့ တင်စားချင်တဲ့ Arrow Town ကို အလည်သွားခဲ့ပါသေးတယ်။
(စာကြွင်း။ ။ ၂၀၁၅ မေလကသွားထားတဲ့ ခရီးကို အပျင်းကြီးတာရယ်၊ အခွင့်ရေးမပေးတာရယ်ကြောင့် မရေးဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ စိတ်ထဲမှာ ပေးစရာအကြွေးကြီးကျန်နေတယ်လို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ခံစားရတယ်။ ပြီးတော့ ကိုယ်ပြန်သွားဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ကိုယ်ရေးထားတဲ့ အင်ဖိုတွေကပဲ ကိုယ့်ကိုပြန်အထောက်အကူဖြစ်စေတယ်ဆိုတာကို အသေအချာသက်သေပြခဲ့လို့ ရေးကိုရေးမှဖြစ်မှာပါ)
EXTRA PHOTOS SESSION
How I wish it was not raining at that time.
Wet and cold but scenery is still beautiful
It was not open that time.
Which country am I pointing?
Let me go shopping for the day.
Posted by mabaydar at 11:23 AM3comments :
ဂရိနိုင်ငံ Zakynthos ကျွန်းပေါ်က အမှတ်ရနေမဲ့ စကားဝိုင်း
“We work for7months and rest for5monthsayear”
“ကျွန်တော်တို့ တစ်နှစ်မှာ ၇လအလုပ်လုပ်ပြီး ၅လ နားတယ်လေ” လို့ Zakynthos ကျွန်းပေါ်က Beijing Chinese Restaurant ဆိုင်ပိုင်ရှင်က ပြောလိုက်တော့ ကျွန်မတို့၂ယောက်လုံး အားကျလိုက်မိတယ်။
-------------------- ။ --------------------
DOTS ရိုက်ခဲ့တဲ့ သင်္ဘောပျက်ကမ်းခြေရှိတဲ့ ဂရိနိုင်ငံက Zakynthos ကျွန်းရဲ့မြို့ငယ်လေးပေါ်က Beijing Chinese Restaurant လို့ခေါ်တဲ့ စားသောက်ဆိုင်လေးကို ကျွန်မတို့ ပြန်မဲ့နေ့လေးမှာ သွားစားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မက အဲ့ဒိအချိန်တုန်းက ကိုယ်ဝန်နုသေးတော့ ကိုယ်စားချင်တာစားမှ အစာကောင်းကောင်းဝင်ပြီး အပင်ပန်းခံနိုင်မှာကိုး။ ဒီတော့ အဲ့ဒိခရီးစဉ်တစ်လျှောက် အာရှစာရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေပဲ လိုက်စားဖြစ်တာများတယ်။ ခရီးသွားရင် လိုကယ်အစားအစာ စားသင့်တယ်ဆိုတာ လက်ခံပေမဲ့ ကိုယ့်အခြေအနေအရ အားရှိအောင် ဝင်တာစားရမယ်လေ။ ဒါတောင် လိုကယ်စာကို တစ်ရက်တစ်လေတော့ စားဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒါတွေ ထားပါလေ။
အဲ့ဒိကျွန်းပေါ်မှာ တရုတ်စားသောက်ဆိုင် ၂ဆိုင်ပဲရှိတယ် ပထမဆိုင်က အရင်နေ့တွေက စားပြီးသွားပြီ အရသာကောင်းတယ်။ (နောက်မှ အဲ့ဆိုင်အကြောင်းပြောပြမယ်နော်)။ အခုဆိုင်ထဲကို ဝင်တော့ ဆိုင်ရှင်တရုတ်လင်မယား ၂ယောက်က ဖော်ဖော်ရွေရွေ ကြိုဆိုပါတယ်။ အမျိုးသားကြီးက အင်္ဂလိပ်လို တော်တော်လေး မပြောတတ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ သူ့လောက် ကျွန်မတို့ကို စကားပြောချင်တာ ၂ယောက်မရှိဘူး။ အမျိုးသမီးကြီးကတော့ ဆက်သွယ်လို့ရရုံ နည်းနည်းပါးပါးပြောတတ်တယ်။ ကျွန်မတို့သွားတဲ့အချိန်က မေလဆိုတော့ ခရီးသွားများတဲ့အချိန်မဟုတ်သေးတော့ ဆိုင်ထဲမှာ ကာစတန်မာ တစ်ယောက်မှ မရှိဘူး။ သူတို့ပေးတဲ့ မန်နျူးမှာ ၂ ယောက်စာ Set meal က အသားဟင်း ၂မျိုး ဟင်းချိုတစ်ပွဲရတယ် အဲ့ဒါကို Euro 25 လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ ဒီတိုင်း တစ်ပွဲချင်းမှာတာထက် သက်သာလို့ တွဲထားတဲ့ ဟင်းတွေ ကိုယ့်အမြင်မှာ အစပ်အဟပ်သိပ်မတည့်ပေမဲ့ Set meal ပဲ မှာလိုက်တယ်။ ဒါတောင် ၂ခုလုံးက ဝက်သားချည်းပဲတွဲထားလို့ ချိုချဉ်ကြော်ကို ဝက်သား၊ ကာရီကို ကြက်သားနဲ့ရမလားဆိုတော့ ရတယ်ဆိုတာနဲ့ အဲ့လိုမှာလိုက်တယ်။
ကျွန်မအတွက်က ထမင်းကြော်လဲမှာလိုက်တယ်။ ဟင်းတွေရောက်လာပြီး စားကြည့်တော့ ကာရီဟင်းက အရသာအတော်ပြင်းတာနဲ့ တခြားဟင်းတွေနဲ့ ရောစားရင် တခြားဟင်းအရသာတွေပျောက်ကုန်မှာရော။ ဝက်သားချိုချဉ်ဟင်းကလဲ ကောင်းတာနဲ့ ဝက်သားချိုချဉ်နဲ့ပဲ ကျွန်မတို့ ၂ယောက်လုံး စားနေကြတာတွေ့တော့ ဆိုင်ရှင် လင်မယားက ...
“ဘာဖြစ်လို့လဲ? စားမကောင်းလို့လား? သူတို့ဟင်းမကြိုက်ရင်ပြောပါ ဘာလိုလဲ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပါ” ဆိုပြီး ကိုယ့်ကို အတင်းမေးတော့တာပဲ။ သူတို့ပုံစံက ရိုးသားပြီး ကျွန်မတို့ သူတို့ဟင်းကို မကြိုက်လို့တောင် သူတို့ဘက်က ပြန်အားနာနေတဲ့ ပုံစံမျိုး။ ကျွန်မတို့ကသာ ဟင်းအသစ်စားမယ်ဆိုရင် ပိုက်ဆံမယူပဲ ထပ်ချက်ပေးမဲ့ ပုံမျိုးမှာရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်မတို့ကလဲ ဗိုက်ပြည့်နေပြီ။ ထပ်လဲ မစားနိုင်တော့ဘူးလေ။
သူတို့ရဲ့ မျက်လုံးတွေကိုကြည့်တော့ ရိုးသားပြီး သူတို့ဟင်း စားမကောင်းတာကို စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့ပုံမှာရှိတော့ စိတ်ထဲအားနာသနားလဲဖြစ်မိပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ မကောင်းတဲ့အကျင့်ပဲပြောရမလား ကောင်းတဲ့ အကျင့်ပဲပြောရမလားက သူတို့ကို ခဏပဲတွေ့ရတဲ့သူတွေပဲဆိုပြီး စိတ်ချမ်းသာအောင် ဆင်ခြေတစ်ခုခုပေးပြီး ဖြေသိမ့်လိုက်လဲ ဖြစ်ပေမဲ့ သူတို့ဆိုင်တိုးတက်အောင် တကယ်ပဲ အကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်း စိတ်ရင်းနဲ့ပေးချင်တာနဲ့ သူတို့ရဲ့ Set Menu က ဟင်းတွဲထားတာ အစပ်အဟပ်မတည့်ကြောင်း၊ ကာရီလို အရသာအရမ်းပျင်းတဲ့ဟင်းကို ချိုချဉ်ကြော်နဲ့ တွဲထားတာမလိုက်ဖက်ကြောင်း၊ အသားဟင်း ၂မျိုးပေးမဲ့အစား ဖြစ်နိုင်ရင် အရွက်ကြော်တစ်မျိုး၊ အသားဟင်းတစ်မျိုး၊ဟင်းချိုနဲ့ အတွဲဆိုရင် အစပ်အဟပ်လိုက်ဖက်ပြီး လူကြိုက်ပိုများနိုင်ကြောင်း မျက်နှာမကြည့်ပဲနဲ့ကို တရက်စပ်ပြောလိုက်မိတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ အဲ့လိုသာ Feedback သွားပေးကြည့် ရိုက်ထုတ်ခံရလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်မပြောတာတွေကို သေသေချာချာနားထောင်ပြီး အခု ကာရီဟင်းကို အရွက်ကြော်နဲ့ လဲပေးရမလားလို့ သူတို့ပြန်ပြောတော့ အတော်လေး အံ့အားသင့်သွားသလို စားနေတုန်းက Mr.Right နဲ့ ပြောဖြစ်တဲ့ “နောက်တဆိုင်က ပိုကောင်းတယ်၊ ဒီဆိုင်သိပ်မကြိုက်ဘူး၊ ပြန်ရောက်လို့ရှိရင် ဘလော့ပေါ်မှာရေးရမယ်” ဆိုတဲ့ ခံစားချက်တွေ ပျောက်သွားတယ်။ သေချာတာကတော့ ဒီဆိုင်က ဆိုင်ရှင်တွေမှာ စားသုံးသူကို စေတနာထားတယ်။ တိုးတက်ချင်စိတ်ရှိတယ်။ အဲ့ဒါက အဓိကမဟုတ်ဘူးလား? ကျွန်မတို့ ဗိုက်လဲပြည့်ပြီမို့ နောက်ထပ်ဟင်းလဲ ထပ်မစားနိုင်တော့တာနဲ့ ဟင်းအသစ်လဲ မယူတော့ပါဘူး။
ဒီလိုနဲ့ ကျွန်မတို့ စားပွဲနားတဝိုက်အရိပ်တကြည့်ကြည့်နဲ့ အလွန်တရာမှ စကားပြောချင်ဟန်ရှိသော ဆိုင်ရှင်တရုတ်ကြီးတဖြစ်လဲ စားဖိုမှူးကြီးကို အားနာနာနဲ့ စကားစမြည်စပြောဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့နဲ့ စကားဝိုင်းဟာ ၁နာရီခွဲလောက် အသာလေးကုန်သွားလိမ့်မယ်လို့ သတိတောင် မထားမိခဲ့ဘူး။
သူတို့ ဘဝအကြောင်းတွေ တရုတ်ပြည်မကြီးကနေ ဂရိကိုဘယ်လိုလာပြီး ဘယ်လိုရုံးကန်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ဘယ် နှနှစ်နေပြီး ဘယ်လိုစုဆောင်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေ မေးမြန်းရင်း ဗဟုသုတတွေ အများကြီးရခဲ့တယ်။
“ကျွန်တော်တို့ ဂရိမှာနေတာ နှစ် ၂၀ကျော်ပြီ။ ပထမ ၁၀နှစ်က သူများ စားသောက်ဆိုင်မှာ စားဖိုမှူးလုပ်ရင်း ဂရိအစိုးရကို အခွန်မှန်မှန်ဆောင်ရတယ်။ အဲ့လို အခွန်မှန်မှန်ဆောင်လို့ ၁၀နှစ်ပြည့်ရင် အမြဲနေထိုင်ခွင့် ရတယ်။ နောက်ထပ် ၅နှစ် အလုပ်လုပ်ပြီး အခွန်မပျက်ဆောင်ရတယ်။ အဲ့ဒါပြီးရင် နိုင်ငံသားဖြစ်တယ်။ တကယ်လို့ အခွန်ဆောင်တာ ပျက်ကွပ်ခဲ့ရင်တော့ အစကနေ ပြန်ဆောင်ရမယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် နိုင်ငံသားမဖြစ်ခင်တုန်းက အလုပ်ရှင်ကို အခွန်ဆောင်ပေးဖို့ အမြဲသတိပေးနေရတယ်။”
ကျွန်မတို့ရဲ့ အလုပ်အကိုင်တွေကိုလဲ သူတို့က မေးတယ်။ ပြီးတော့ ပညာတတ်တာကောင်းတယ်။ သက်တောင့်သက်သာငွေရှာလို့ရတယ်တဲ့။ သူကတော့ ပညာမတတ်ဘူးတဲ့။ ဒါပေမဲ့ ဟင်းချက်ရတာကို ဝါသနာပါတယ်။ သူချက်နေတဲ့ဟင်းကို လူတွေကြိုက်တယ်ဆို ပီတိဖြစ်တယ်တဲ့။ ကျွန်မတွေးမိတယ် ပညာတတ်လို့ အလုပ်အကိုင်ကောင်းကောင်းရပေမဲ့ ကျွန်မတို့ဘဝက လခစား သူများအလုပ်သမားလေ။ သူက သူကိုယ်တိုင် စားဖိုမှူး သူကိုယ့်ပိုင်စီးပွားနဲ့ သူဝါသနာပါရာအလုပ်ကို လုပ်နေနိုင်တာ သူ့အိပ်မက်အတိုင်းနေနေရတဲ့ ဘဝမို့ ကျွန်မတို့ထက်သာပါတယ်။ အဲ့လို ကျွန်မက ပြောလိုက်တော့… သူက… ငယ်တုန်း ပိုက်ဆံကိုစုဖို့နဲ့ ကြီးလာတော့ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးတစ်ခုလုပ်ပေါ့လို့ အကြံပေးတယ်။ ပညာတတ်တော့ အဲလို စုဆောင်းဖို့ အချိန်တိုတို မပင်မပန်းပဲဖြစ်တယ်။ ပညာမတတ်တော့ ငါတို့လို နှစ်ရှည်လများ ပင်ပင်ပန်းပန်းအလုပ်လုပ် စုဆောင်းပြီးမှ ဖြစ်တာလေတဲ့။ အဓိကက ပိုက်ဆံစုဖို့ပဲတဲ့။
ဒါပေမဲ့ ကျွန်မက အထွန့်တက်ခဲ့သေးတယ်။ ကိုယ်အသုံးမကျတာ လူသိတာပေါ့နော်။ အန်ကယ်က ဟင်းချက်တတ်တော့ ခုလို ကိုယ်ပိုင်စားသောက်ဆိုင်ဖွင့်ပြီး ဦးစီးနိုင်တဲ့ အရည်အချင်းရှိတယ်လေ။ ကိုယ်တွေက Electronic Engineer ဆိုပြီး အိမ်က မီးလုံးဘာလို့ပျက်မှန်းမသိတဲ့သူမို့ စက်ရုံကြီးထတည်ဖို့လဲ မဖြစ်နိုင်ဘူးလေလို့။ အန်ကယ့်လို လုပ်နိုင်ဖို့က ကိုယ်တိုင် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အတတ်ပညာတစ်ခုခုတတ်မှရမှာ။ ကိုယ့်ပညာကို သူများလခစားအလုပ်ကလွဲလို့ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေး ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်း အိုင်ဒီယာမရှိဘူးဆိုလဲ ခံရမှာပဲ။
“ငါတို့က ချမ်းသာဖို့မလိုဘူး။ ဒီဆိုင်ခန်းငှားခကြေပြီး နည်းနည်းပါးပါးနေလို့စားလို့ရရင် ကျေနပ်တယ်။ ငါတို့ ဘဝက ပျော်တယ်။ တစ်နှစ်မှာ လူလာများတဲ့ အချိန် ၇လပဲ ဆိုင်ဖွင့်ပြီး ၅လ ဘာအလုပ်မှ မလုပ်ပဲ တရုတ်ပြည်ပြန်နေတယ်။ ငါ့သမီးကတော့ ဒီမှာမွေးတော့ တရုတ်ပြည်ကို သိပ်မကြိုက်ဘူး”
ဥရောပနိုင်ငံတွေမှာ ဝင်ငွေခွန်ဆောင်ရတာ များတာကျတော့ရောဆိုတော့၊ ဂရိက အစိုးရသာ ဆင်းရဲတာ နိုင်ငံသားတွေက မဆင်းရဲဘူးတဲ့။ အခွန်မှ မှန်မှန်မဆောင်ကြတာတဲ့။ ဂရိမှာ အခွန်က လိမ်ပြလို့ရတယ်တဲ့။ သူတို့နိုင်ငံသားတွေဆို ပတ်ပြေးနေတာတဲ့။
ကျွန်မက ဆိုင်ခန်းငှားခဘယ်လောက်ပေးရပြီး ခုလိုအာရှအစားအစာကို အဖြူတွေလာမစားပုံနဲ့ ကိုက်ရဲ့လားဆိုတော့ ခရီးသွားရာသီဆို သူတို့ဆိုင်က လူပြည့်ပါတယ်တဲ့။ သူတို့ဆိုင်ခန်းငှားခကလဲ စင်္ကာပူတို့ မြန်မာတို့နဲ့ယှဉ်တော့ သက်သာတယ်။ ကိုယ်တွေတောင် အဲ့မှာပဲ ချက်ချင်း ဆိုင်တခန်းတောင် ဖွင့်ချင်သွားတယ်။ (ဒါမဲ့ နိုင်ငံသားဖြစ်မှ အဲ့ဒိဈေးနဲ့ရနိုင်မှာ)
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် ၂၀၁၅ အောက်တိုဘာတုန်းက ရုပ်ရှင်အဖွဲ့တွေ သူတို့ဆိုင်ကိုလာစားတာအများကြီးပဲတဲ့။
ကျွန်မတို့က အဲ့ဒိကားကြည့်ပြီး ဒီ သင်္ဘောပျက်ကမ်းခြေကို လာလည်တဲ့အကြောင်းပြောတော့မှ အခုနောက်ပိုင်း အာရှသားတွေကို တွေ့လာရတာ ဒါ့ကြောင့်ကိုးတဲ့။ သူတို့ကတော့ ကိုးရီးယားကားဘာမှန်းတောင် သိပုံမရဘူး။ ကိုယ်ကတော့ ဒီဆိုင်ရဲ့ ဘယ်စားပွဲမှာ Song-Song couple ထိုင်ခဲ့မလဲလို့ တွေးမိသွားတယ်။
ဒီလိုနဲ့ စကားပြောကောင်း၊ သူတို့ ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကို ကိုယ်မေးသမျှ စိတ်မဆိုးပဲ မတတ်တခေါက် အင်္ဂလိပ်နဲ့ ခြေဟန်လက်ဟန်အစုံ၊ (တခါတရံ သူ့အမျိုးသမီးက သိသလောက်ဝင်ထောက်ပြရ၊) အကုန်လုံး ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဝမ်းပန်းတသာ စကားပြောရလို့ ကျွန်မစိတ်ထဲ
“အော်… တခါတရံမှာ ခရီးသွားခြင်းဆိုတာ သူများတွေပြန်ပြဖို့ ဓာတ်ပုံတွေ လန်ထွက်နေအောင်ရိုက်၊ ဘယ်လောက်ပျော်နေကြောင်း၊ ဘယ်လို နေရာသစ်တွေကို ရောက်ခဲ့ကြောင်း Like တွေ Followers တွေများဖို့ ထက်ပိုကြောင်း၊
ဟန်းဖုန်းတွေကို ခဏလေး မေ့ပျောက်ပြီး လိုကယ်တွေနဲ့ ခုလို စကားပြောရတဲ့ အနှစ်သာရ၊ ရရှိတဲ့ ဗဟုသုတ၊ အွန်လိုင်းက မမြင်ရတဲ့ လူတွေရဲ့ Likes တွေ ကွန်မန့်တွေထက် ကိုယ့်ရှေ့မှာရှိနေတဲ့သူရဲ့ မျက်လုံးတွေကို တည့်တည့်ကြည့်ပြီး စကားပြောရတဲ့ အရသာဆိုတာကို ခံစားသင့်ကြောင်း မဗေဒါရဲ့ စာဖတ်သူတွေကို ပြောပြရအုံးမယ်” လို့…
Posted by mabaydar at 2:59 PM 1 comment :
Labels: Greece , Greece (Zakynthos) , Travel Tips , ခရီးသြားမွတ္တမ္း
Goblin - Drama Review
ဇာတ်ကားအမည် - Goblin (aka) Guardian: The lonely and Great god
Genre - Romance, Fantasy, Drama
Written by - Kim Eun Sook
Directed by - Lee Eung-bok, Kwon Hyuk-chan, Yoon Jong-ho
Distributor - TvN
Original release - December 2, 2016 – January 21, 2017
အသက် ၉၃၉ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ တန်ခိုးရှင်(Goblin) ကင်မ်ရှင်း (Gong Yoo) ဟာ တကယ်တော့ သူရဲ့ သတို့သမီးကိုု လိုက်လံရှာဖွေစောင့်စားနေခဲ့တာပါ။ ဘာဖြစ်လိုု့လဲဆိုုတော့ အဲ့ဒိသတိုု့သမီးကိုတွေ့မှ သူ့ရဲ့ ရင်ဘတ်မှာ စိုက်နေတဲ့ ကြိမ်စာသင့်ဓားကို ထုတ်ခိုင်းြပီး သူ့ရဲ့ ပျင်းစရာ အထီးကျန်စရာကောင်းတဲ့ မသေနိုင်တဲ့ ဘဝကြီးကို အဆုံးသတ်နိုင်မှာမို့ပါပဲ။ သူနဲ့အတူနေထိုုင်သူကတော့ လူတွေသေရင် ဝိဉာဉ်ကိုု အတိတ်မေ့ဆေးတိုုက်ပြီး ဘဝတစ်ပါကိုုပြောင်းစေတဲ့ အလုုပ်ကိုုလုုပ်ကိုုင်တဲ့ သေမင်း (Lee Dong Wook) ပဲဖြစ်တယ်။ သူတိုု့ ၂ယောက်လုံုးဟာ ဟိုုးအရင်ဘဝက သူတိုု့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ ပြုခဲ့တဲ့ ကောင်းမှု ဆိုးမှုတွေကြောင့် ခုလို ဘဝတွေကို မိုုးနတ်မင်းက အပြစ်ပေးတဲ့အနေနဲ့ ပေးထားခြင်းခံရတာဖြစ်တယ်။ အထက်တန်းကျောင်းသူလေး Ji Eun Tak (Kim Go Eun) ဟာ သူ့အမေဆုံုးပြီး ငယ်ငယ်ကတည်းက နှိပ်စက်တဲ့ အဒေါ်မိသားစုုနဲ့ နေရပေမဲ့ သူ့ဘဝကိုု အကောင်းဆုံုးနေထိုုင်တယ်။ သူ့ရဲ့ ထူးခြားချက်က သရဲတွေကိုု မြင်နုုိင်တာပဲ။ သူဟာ Goblin နဲ့ ဆုံုးစည်းပြီးနောက်ပိုုင်း Goblin ကို ချစ်ြမတ်နိုး ခဲ့တယ်။ တကယ်တော့ သူဟာလဲ Goblin လိုက်ရှာနေတဲ့ သတိုု့သမီးပဲဖြစ်တယ်။ Kim Sun (Yoo In Na) ကတော့ ကြက်ကြော်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ပြီး Eun Tak ရဲ့ အလုပ်ရှင်ဖြစ်တယ်။ သူနဲ့ သေမင်းဟာ ကံအကြောင်းဆုံုလိုု့ တွေ့ခဲ့ကြပြီး မြင်မြင်ချင်းချစ်မိသွားကြတယ်။
Goblin ရဲ့ မသေနုုိင်တဲ့ ဘဝကြီးကိုု အဆုံုးသတ်ပေးရမဲ့ သတိုု့သမီးတိုု့ စုံုတွဲ (တနည်းအားဖြင့်) သေကွဲကွဲမဲ့ စုံုတွဲနဲ့ မတူညီတဲ့ ဘဝတွေဖြစ်တဲ့ ကြက်ကြော်ဆိုင်ပိုင်ရှင်မလေးနဲ့ သေမင်းတိုု့ရဲ့ ချစ်ဇာတ်လမ်းက ဘယ်လိုုဇာတ်သိမ်းမလဲ။ ဘယ်လိုု ဘဝ ဘဝက ရှေးရေစက်တွေကြောင့် ခုုလိုုမျိုး စုံုတွေ့ကြရတာလဲ ဆိုုတာစိတ်ဝင်စားရင် ကြည့်လိုုက်နော်။
ဒီဇာတ်ကားကိုု ပါဝင်တဲ့ ဇာတ်ဆောင်တွေနဲ့ သူတိုု့ရဲ့ သရုုပ်ဆောင်မှု၊ ဖက်ရှင် အတွက် ၁ မှတ်။
လှပတဲ့ ရိုုက်ချက်တွေနဲ့ ကာလာ အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ တင်ဆက်မှု အတွက် ၁မှတ်။
ရိုုက်ကွင်းနေရာ လှလှလေးတွေအတွက် ၁မှတ်။
ဇာတ်လမ်းက ထုံုးစံအတိုုင်း အစပိုုင်းကောင်းပြီး အလည်ပိုုင်းနည်းနည်းပျင်းလာကာ၊ နောက်ဆုံုးပိုုင်းကိုု ကိုုယ်ကတော့ သိပ်စိတ်တိုုင်းမကျတဲ့အတွက် အမှတ်ပြည့်မပေးပဲ 4/5 rating ပဲ ပေးထားတာပါ။
အပေါ်မှာ ပြောခဲ့သလိုုပဲ ဒီကားကိုု အဆုံုးထိကြည့်ဖြစ်ဖိုု့ စွဲဆောင်ခဲ့တာကတော့ ဇာတ်လမ်းက ဒီလောက်မဟုုတ်ပေမဲ့ ကျန်တာတွေကြောင့် တစ်ပတ်တစ်ပတ် ဆက်ကြည့်ချင်စိတ်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ rating ကိုု ၅မှတ်လုုပ်ထားလိုု့ ဇာတ်လမ်းအတွက် တစ်မှတ်မှ မရသလိုုဖြစ်နေပေမဲ့ ဇာတ်လမ်းထဲက ကောင်းတာလေးတွေလဲရှိပါတယ်။ အပေါ်က အမှတ်က အကြမ်းပျင်း သက်သက်ပါ။ ဥပမာ မင်းသား ၂ယောက်ကြားက Friendship and Bromance, မင်းသမီးနဲ့ သေမင်းကြားက ခင်မင်မှု စသဖြင့်ပေါ့။ဇာတ်လမ်းအလည်ပိုင်းမှာ မင်းသားနဲ့ မင်းသမီး အီစီကလီ ကလူအိသိုု့ မြူအိသိုု့ တွန်းလိုုက် ဆွဲလိုုက်လုုပ်နေကြတာကိုု fancy အချစ်ကားကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ သဘောကျချင်ကျနုုိင်ပေမဲ့ ကျွန်မကတော့ အဲ့ဒိအခန်းတွေ နည်းနည်လေးလျော့ပြီး (အဓိကက Goblin တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ဆယ်ကျော်သက်ကောင်မလေးကိုု ချစ်လာတာကိုု တော်ရုုံပြရင်လုံုလောက်တယ်ထင်တာပဲ) Goblin နဲ့ သူ့တူကြားက သံယောဇဉ် Development နဲ့ Goblin နဲ့ သူ့ညီမကြားက ကြည့်ရှုသူတွေ ဂရုုဏာရသပေးစေမဲ့ မောင်နှမ သံယောဇဉ်ကိုုလဲ နည်းနည်းပိုုတိုုးပြသင့်တယ်လို့ထင်တယ်။ (အောက်ရောက်မှ မကျေနပ်တာအတိအကျ spoiler alert နဲ့ ရေးမယ်နော်)... ယေဘူယျ ဝေဖန်ရေးအရကတော့ များါများစားစားရေးလိုု့မရဘူး။ အပေါ်မှာပြောခဲ့သလိုုပဲ ဇာတ်လမ်းကိုု ကိုုယ့်အတွက် သိပ်သဘောမကျပေမဲ့ (ဆိုုးဆိုုးရွားရွားမဟုုတ် ကြည့်ပျော်ပါသည်) ကျန်တဲ့ အချက်တွေကတော့ ဒီကားမှာ အတော်လေး အားကောင်းတဲ့အတွက် စိတ်ဝင်စားရင်ကြည့်ဖိုု့တိုုက်တွန်းပါတယ်။
ကြည့်ပြီးသူတွေပဲ ဒီအပိုုင်းကိုု ဆက်ဖတ်မယ်ယူဆတဲ့အတွက် မေးလိုုက်မယ်နော်။ အဆုံုးသတ်ကိုု ဘယ်လိုုထင်သလဲ? မဗေဒါရဲ့ ပေချ့်ပေါ်မှာ မေးလိုုက်တော့ တော်တော်များများရဲ့ ကွန်မန့်တွေက ကိုုယ်နဲ့ တူတူပါပဲ။ ကိုုယ်တစ်ယောက်တည်းမဟုုတ်တာသိရတော့ တော်ပါသေးရဲ့ဆိုုပြီး ကျေနပ်မိတယ်။ Goblin က မသေမရှင်နဲ့ ၉ နှစ်လောက် သဲဂန္တာရထဲ ဒုုက္ဖခံပြီး ဒီလူ့ဘုံုကိုု အုုံုုးဆိုု ကိုုယ်ထင်ပြ ပြန်ရောက်လာတော့ သူ့ရဲ့ ဇာတ်သိမ်းကဘာလဲ? ကောင်မလေးက အချိ်န်တန် အသက်ကြီးပြီး သေသွားမှာ။ သူကတော့ တစ်ယောက်တည်း မသေနုုိင်ပဲ ဘယ်အချိန်ထိ ဆက်ကျန်နေရမှာလဲ? အဲ့ဒါက သူ့အတွက် ပျော်စရာ အဆုံုးသတ်လိုု့ မဗေဒါကတော့ မမြင်ဘူး။ သံသရာ ဝတ်ဆင်းရဲကြီးကနေ ဘယ်တော့မှ မလွတ်ကျွတ်တော့ဘူးပေါ့။ လူတစ်ယောက်သက်တမ်း ၁၀၀ မှာ အရွယ်ရောက်ဖိုု့ ၁၈နှစ် နှုတ်ရင် အလွန်ဆုံုး ၈၂ နှစ်ပေါင်းရရင်တောင်။ သူလိုု့ နှစ်ပေါင်း ၉၀၀ ကျော်နေပြီး ကိုုယ်ချစ်တဲ့သူတွေ သေတာကိုု အကြိမ်ကြိမ်ကြည့်နေရမဲ့ ဒုုက္ခအတွက် ကိုုယ်ကတော့ သူသေသွားတာကမှ တော်သေးတယ်လိုု့ ထင်အုံုးမယ်။ ဒါမှမဟုုတ်လဲ သူပြန်ပေါ်လာတယ်လိုု့ ဇွတ်အတင်းကြီး လုပ်ပြီးမှတော့ သူ့ကိုု Goblin အနေနဲ့ မဟုုတ်ပဲ ရိုုးရိုုးလူသာမာန်အနေနဲ့ပေါ်လာတယ်လိုု့ပဲ လုုပ်လိုုက်ပါတော့လား။ ဒါဆိုု သူတိုု့့၂ယောက်လဲ သေတပန် သက်တဆုံုးပေါင်းရလေသတည်းပေါ့။
ဒီလိုမှ မဟုုတ်လဲ မင်းသမီးကိုုပေးမသေပဲ သူအိုတော့မှပဲ Goblin ရဲ့ ဓားကိုု ဖြုတ်ပြီး အဲ့အချိန်ထိပေါင်းကြပေါ့လိုု့အစကတွေးမိတယ်။ ဒါကိုုတော့ စာရေးဆရာမက မင်းသားဓားကိုု မနှုတ်ရင် မင်းသမီးက သေဘေးနဲ့ အမြဲတွေ့မယ်လိုု့ ပြန်ပိတ်ထားတော့ ထားပါတော့လိုု့ပဲ ပြောတော့မယ်။
ပြီးတော့ အဆုံးမှာ မင်းသမီးကိုု ဇွတ်သေခိုုင်းပြီး နောက်ဘဝမှာပြန်ဆုံုးမယ်ဘာညာဆိုုတဲ့ Concept ကြီးကိုု ကိုုယ်တော့ လက်မခံချင်တာ။ သူတိုု် ့ပြောသလိုု Eun Tak က နောက်ထပ် ၃ ဘဝကျန်သေးတယ်ဆိုုရင် အလွန်ဆုံုးထပ်ပေါင်းရ ၂၄၆နှစ်ပေါ့။ အဲ့၃ဘဝလုံုးလဲကုုန်ရော Goblin ကြီးက တစ်သက်လုံုးအထီးကျန်ပြီပေါ့။ ပြီးတော့ ၃ ဘဝလုံုး မိန်းမအဖြစ်ဝင်စားအုံးမှ။ ယောကျင်္ားအဖြစ်ဝင်စားရင် Brokebark mountain (Gay) ဇာတ်လမ်းတွေ ဆက်ရိုုက်နေရတော့မပေါ့။ အဆုံုးကြီးက ဇွတ်အတင်းပေါင်းပေးပေမဲ့ ရေရှည်အတွက် ဆက် စဉ်းစားတဲ့ ပရိတ်သတ်တွေအတွက်ကတော့ ဘာလားပေါ့။ (Mr.Right ကတောင်ပြောနေသေးတယ် Goblin ၉ နှစ်နေတော့့ ပြန်ပေါ်လာတယ် မင်းသမီးက မမှတ်မိဘူး။ တဖြည်းဖြည်းပြန်မှတ်မိလာတာကိုု နည်းနည်းရှည်ရှည်ပြပြီး ဖြတ်လိုုက်ရင်တောင် တော်အုံုးမယ်တဲ့)။ ခုုဟာက မင်းသမီးက မှတ်မိချင်တော့လဲ ချက်ချင်းကြီးဆိုုတော့ ကိုုယ်က ကြည့်နေရင်းနဲ့တောင် နောက်နေတာလားလိုု့ မေးချင်တယ်။ ကနေဒါက သရဲကလဲ မကျွတ်လွတ်တဲ့အပြင် မင်းသမီးကိုု မှတ်တောင် မှတ်မိနေသေး။
မင်းသမီးကိုု ဇွတ်အတင်း သေခိုုင်းတာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ကြည့်ရတာ စာရေးဆရာက ပေးချင်တဲ့ မတ်စေ့တွေ အပေးလွန်သွားတယ်ထင်ပါ့။ သူပြချင်တာက တချို့အရာတွေဟာလဲ မိုုးနတ်မင်းရဲ့ ဆန္ဒကုုိ လွန်ဆန်နုုိင်တယ်ဆိုုတဲ့ သဘောမျိုး၊ လူတွေရဲ့ စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံမှုနဲ့စတေးတာဟာ မိုုးနတ်မင်းကြိုတင် တွက်ချက်လိုု့မရတဲ့ အရာဆိုုတာကိုု ပြောချင်တာများလား။ (ဒါပေမဲ့လဲ မင်းသမီး အသက် ၆၀၊ ရ၀ လောက်ကျမှ စတေးလိုု့ ရဘူးလားဟင်။ ပြောပြတာပါ)
ဘာပဲပြောပြော သေမင်းနဲ့ သူ့ကောင်မလေးဇာတ်သိမ်းကိုုမှ ကျေနပ်သေးတယ်။ သူတိုု့ ၂ယောက်က နောင်ဘဝမှာ စိတ်သစ်နဲ့ တစ်ယောက်ကိုု တစ်ယောက် မမှတ်မိကြတာကိုုလဲ သဘောကျတယ်။ သူတိုု့က တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်မှတ်မိရင် ဘယ်လုုိမှ မပေါင်းဖတ်နိုုင်တဲ့ စုံုတွဲကိုုး။ သူတိုု့အတွဲကိုုကြည့်ပြီးတော့ ရှေးရေစက် ကြောင်းကံကြောင့် မြင်မြင်ချင်းပင် ဘာ့ကြောင့်များ ချစ်ချင်တယ်ဆိုုတဲ့ သီချင်းသွားသတိရမိတယ်။ ဒါနဲ့ Lee Dong Wook ဆံပင်ပုံုလေး ပြောင်းသွားပေမဲ့ တစ်မျိုးလေး ချောနေသေးတဲ့ အာဂျီရှီပဲနော်... ခွိ။ ဒီ အာဂျီရှီတွေ ဘာမှ မလုုပ်ပဲ လမ်းလျှောက်တာကိုု slow motion နဲ့ ပြရင်တောင် ကြည့်ကောင်းနေတာ ပြော မပြောချင်ဘူး။
အပေါ်က ဇာတ်ကောင်ပတ်သတ်မှုတွေအကြောင်းနဲ့ပတ်သတ်လိုု့ လိုုတယ်ထင်တာလေးတွေ မမေ့ခင်ရေးရရင်ဖြင့် အဆုံးမှာ Goblin က ကျန်ခဲ့ပြီး သူ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေက အသက်တွေကြီးကုုန်တာကိုု ပြရာမှာ ကိုုယ်ကြည့်ချင်ဆုံုးက Doek Hwa ပဲ။ Doek Hwa နေရာမှာ သူ့အဖိုုးအနေနဲ့ သရုုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ အဖိုုးကြီးကိုု ပြန်ထည့်ပြီး သူ့ရဲ့မျိုးဆက် နောက်ထပ် မြေးလေး (Doek Hwa နောက်တစ်ယောက်ထပ်ရောက်နေတာမျိုး) လေး ကြည့်ချင်မိတယ်။ ခုုဟာက CEO ကမှ ပြန်ပါသေးတယ်။ နောက်ပြီး Goblin နဲ့ သူ့ညီမရဲ့ သံယောဇဉ်နဲ့ပတ်သတ်မှုကိုု ပြတာတော့ သိပ်ပေါ့လွန်းတယ်ကိုုထင်တယ်။ ၉ နှစ်နေပြီး ပြန်လာတော့လဲ ဆိုင်ရှေ့ကနေ မမြင့်တမြင်ပဲ လာကြည့်တယ်ပြတာ။ အဆိုုးဆုံုးကတော့ ဇာတ်မြုပ်သွားတဲ့ ညီမ နှစ်ပေါင်းများစွာကြာလိုု့ သေတော့ သေမင်းဆီမှာ ရေနွေးကြမ်းသောက်အပြီး ဘဝတစ်ပါးမကူးခင် အစ်ကိုုနဲ့ နည်းနည်းပါးပါး စကားစမြည်ပြော အဆုံုးသတ်နှုတ်ဆက်တာလေးများ လုုပ်ပါတော့လား။ ခုုတော့ ညီမကိုု သိပ်ချစ်ပါတယ်ဆိုုပြီး ပြတင်းပေါက်ကနေပဲ လှမ်းနှုတ်ဆက်စရာလား။ အဲ့ဒိနေရာတွေမှာ Emotional scene stealer တွေ ထည့်လိုု့ရသေးတယ်လိုု့ ထင်တာပဲ။ (ကိုုယ်ပိုုကြည့်ချင်မိတာကိုု ပြောပါတယ်)။
ပြီးတော့ အဆုံုးသတ်ထိ အကျီင်္အနီနဲ့ Sexy lady ကြီးက ဘာနတ်မှန်း သေချာကိုု မသိတာ။ သူကလဲ Goblin လိုု Guardian ပဲလား။ သူကရောဘာလိုု့ လူတွေကိုု ရွေးပြီး လိုက်စောင့်ရှောက်နေတာလဲ။ သူ့ ဇာတ်ကောင်က မင်းသမီးလုုိအပ်ရင် ကူဖိုု့ထည့်ထားတာက လွဲလိုု့ ဘာမှ ရေရေရာရာ ပတ်သတ်ဆက်နွယ်မှု မရှိသလိုုပဲ။
အဲ့တော့ ဒီဇာတ်လမ်းမှာ အကောင်းဆုံုးပြနုုိင်တာဆိုုရင်တော့ အာဂျီရှီ ၂ယောက်ကြားက Bromance နဲ့ သူတိုု့ရဲ့ အလုုပ်အကိုုင်။ အထူးသဖြင့် Goblin စောင့်ရှောက်ကူညီလိုုက်တဲ့ လူတွေရဲ့ဇာတ်လမ်းနဲ့ ရန်ဖန်ရန်ခါ Grim reaper ရေနွေးကြမ်းတိုုက်တဲ့သူတွေနဲ့သူ့အလုုပ် nature ပေါ့။ နောက်ပြီး မင်းသားတွေရဲ့ စျေးအလွန်ကြီးတဲ့ ဖက်ရှင်စတိုုင် ဂျက်ကက်ကြီးတွေလဲ သဘောကျတယ်။ ဒီလိုု ဂျက်ကက်ကြီးတွေကိုု ဒီလိုု အာဂျီရှီအလန်းဇယားတွေ ဝတ်တော့မှ ဂျက်ကက်တန်ဖိုုးလဲ ပေးရတာ တန်သွားတာပေါ့။ လှတပတ မျက်စိပသာဓရှိ။
ကဲကဲ... ပြောတာတွေလဲ မှတ်မိသလောက်တော့ရေးထားတယ် အချိန်လဲ သိပ်မရှိတော့လိုု့ တော်သေးပြီ။ ပြောချင်တာထပ်ဖြည့်ချင်ရင် ထုံုးစံအတိုုင်း ကွန်မန့်မှာ လာပွားကြနော်။
Posted by mabaydar at 5:06 PM2comments :
Posted by mabaydar at 5:11 PM 8 comments :
Honeymoon to New Zealand Day 12: Ziplining and Rom...